HiRise Wireless oo laga soo bilaabo Laba iyo toban Koonfurta, oo ah xeedho ku habboon 2-in-1 | Wararka IPhone
HiRise Wireless oo laga soo bilaabo Laba iyo toban Koonfurta, xeedho fiican 2-in-1
In badan oo naga mid ahi waxay moodeen in tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless-ka ah aysan wax badan iska bixin doonin, laakiin soo-saarayaasha ayaa nagu qanciyay tan ka soo horjeedda. IYO Laba iyo toban koonfur maanta waxay na siineysaa hal tusaale oo dheeri ah tan tan saldhiggeeda cusub ee wireless-ka lagu xiro ee HiRise Wireless.
Saldhig leh naqshad qurux badan oo kombuyuutarkaaga ah, taasna waxaa loo isticmaali karaa xeedho la qaadan karo inaad ku qaadatid shandad kasta, shandad ama shandad. Waanu tijaabinay waxaananu kuu sheegi doonaa dareenkayaga xagga hoose si aad u aragto wax kasta oo ay nafteeda siin karto.
1 Kuwa ugu fiican ee rarka toosan
2 Kuwa ugu fiican ee rarka jiifka ah
3 Qalabka degdega ah iyo alaabada caymiska
5 Sawirka sawirada
Kuwa ugu fiican ee rarka toosan
Kiciyeyaasha taagan waxay noqdeen xulashada doorbida isticmaaleyaal badan, gaar ahaan tan iyo markii la bilaabay iPhone X oo ay la socoto nidaamka aqoonsiga wajiga. Inaad taleefanka ku haysato saldhigeeda, oo aad ku soo jeeddo, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u aragto ogeysiis kasta oo aad hesho maaddaama Aqoonsiga Aqoonsigu si otomaatig ah u aqoonsado Wejigaaga. Laba iyo toban koonfur way ogtahay tan, markaa guusha weyn ee xarunteeda HiRise noocyadeeda kala duwan, sidaa darteedna waxay u dooratay isla nidaamkan qaabkan cusub ee wireless-ka ah.
Si kastaba ha noqotee, nidaamkani wuxuu leeyahay xoogaa faa'iido daro ah: uma ogolaanayo AirPods in dib loo soo celiyo, waana wax aad u tiro badan oo aan raaxo lahayn in lagu safro safaradaada. Sababtoo ah isticmaaleyaal badan ayaa doorbidaya xamuulka jiifka ah, ka fudud oo la jaan qaadaya AirPods.
Kuwa ugu fiican ee rarka jiifka ah
Halkan waxaa ku imanaya fikraddii weyneyd ee ay ka qabeen Laba iyo Tobanka Koofureed: qallooc yar oo ku saabsan saxankeeda lacag-bixinta oo laga soo saaray saldhigga HiRise, taas oo u oggolaanaysa in loo isticmaalo saldhig hoose oo kuu oggolaanaya inaad dib u buuxiso AirPods-kaaga. Saldhiggan yar wuxuu aad ula mid yahay saldhigyada lacag-bixinta caadiga ah, oo leh cabbir aad u yar oo caato ah, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon in la maro safar kasta. Waxay sidoo kale isticmaashaa isku xirka USB-C, oo si isdaba joog ah loogu adeegsado aaladaha noocan ah, sidaa darteed fiilo kasta oo nuucaan ah ayaa u shaqeyn doonta, sidaas darteedna uma baahnid inaad qaadatid fiilooyin ka badan inta lagama maarmaanka u ah shandaddaada.
Qalabka degdega ah iyo alaabada caymiska
Laakiin feker weyn oo keliya nagama hor imaanno, laakiin sidoo kale tayada iyo naqshadeynta xeedho ayaa ah waxa qofku ka filayo badeecadda ugu sareysa, sida kuwa laba iyo tobanka koonfureed ay noo caadeysteen. Saldhigga waxaa lagu dhammeeyaa chrome qurux badan oo kudhowaad isku mid ah qaab dhismeedka booskeyga cirro leh iPhone XS Max. Halka aan ku taageerno iPhone-ka waxaan ka helnaa maqaar jilicsan, saadaal yarna waxay ka hortageysaa iPhone-ka inuu siibto markii si toosan loo dhigo. Dambe xarkaha gadaashiisa waxaa ka mid ah magaca HiRise iyo iftiin yar oo buluug ah oo tilmaamaya in ay lacag bixinayso.
Qalabka dhameystiran wuu culus yahay (454 garaam), sidaa darteed kama dhaqaaqi doono miiskaaga, sikastaba "Power Disc" sida labo iyo tobanka koonfureed ay ugu yeeraan salka yar ee aad ka soo saari karto, culeyskiisu yahay 64 garaam iyo cabirkiisu aad ayuu uyar yahay (87x57x12mm) sidaa darteed xitaa waxaad ku qaadan kartaa jeebkaaga jaakada iyada oo aan si dhib leh loo dareemin.
Marka laga hadlayo tilmaamaha gudaha, Awood kuleyl ah illaa 10W waa in lagu daraa isku xirka USB-C, sidaa darteed ma isticmaali kartid oo keliya lacagta degdegga ah ee Apple (7,5W) laakiin sidoo kale waxaad ka faa'iideysan kartaa dacwadaha ugu awoodda badan ee la jaan qaada moodooyinka noocyada kale sida Samsung. Waxaa ku jira sanduuqa waa 1,5 mitir USB-A ilaa USB-C, kaas oo aad ku xirmi karto dekedda USB kasta ee kombiyuutarka ama xeedho derbiga caadiga ah.
Laba iyo tobanka koonfureed waxay sii aadeen xeedho wireless ah iyo saldhigeeda cusub ee HiRise Wireless charge waxay isku daraysaa faa'iidooyinka xeedho toosan oo desktop ah, oo leh naqshad runti aad u qurux badan, oo leh nooc xeedho yar oo la qaadi karo ah. Ka mid noqoshada isku xiraha USB-C waa guul, tayada qalabka waa waxa aad ka filan karto nooc sida Twelve South ah, taas oo aan marnaba niyad jabin. Waqtigan xaadirka ah waxaan ka heli karnaa oo keliya bogga Labaad ee Koonfurta Koofureed (isku xirka) $ 79,99.
Dhammaan-hal-desktop iyo laptop ayaa istaagaya
AirPods la jaan qaadi kara, iPhone iyo noocyo kale
USB-C iyo 10W awood
Kuma jiraan xeedho darbiga
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » HiRise Wireless oo laga soo bilaabo Laba iyo toban Koonfurta, xeedho fiican 2-in-1
Fikradan xiisaha lihi waxay ina siisaa xalka dhibaatooyinka isku-xidhka marka nala soo waco
Baadhitaanka dayrta ee Apple Watch ayaa wacay adeegyada gurmadka kadib markii milkiilaheeda uu shil gaari galay